Vaovao - Toetran'ny Rice Bird Net
Antsoy izahay: + 8615161185777
Ecran tsy misy vovoka
Toetran'ny Rice Bird Net
Amin'izao fotoana izao, maro ny vorona mangalatra sakafo, saingy raha mbola lehibe ny fiantraikan'ny halatra goavana, dia mamolavola harato vorona ireo mpandray anjara mba hamahana ny toe-javatra toy izany. Noho ny tontolo fampiasa samihafa dia samy hafa ihany koa ny karazana harato vorona, fa ny harato vorondrano ampiasaina amin'ny vary kosa dia antsoina hoe "lalao vorona vary", ary miavaka ny endriny raha oharina amin'ny vokatra hafa. Inona àry no mampiavaka ny Rice Bird Net? Jereo ireto manaraka ireto:
Rice Bird Proof Net dia lamba harato vita amin'ny fanenjanana polyethylene mampiasa additives simika toy ny fisorohana ny fahanterana sy ny fiarovana UV ho akora fototra, ary manana tanjaky ny tensile avo, fanoherana hafanana, fanoherana ny rano, fanoherana ny harafesina, ary fanoherana ny fahanterana. Afaka mamono bibikely mahazatra toy ny lalitra sy moka, tsy misy tsirony, mora manary fako. Mora ny mitahiry sy mampiasa amin'ny fampiasana ara-dalàna, ny fiainana talantalana marina dia mety hahatratra 2-5 taona eo ho eo. Ny haraton'ny vorona dia manana mangarahara maivana sy miasa alokaloka antonony, mamorona toe-javatra tsara ho an'ny fitomboan'ny vokatra, mampihena be ny fampiasana fanafody simika amin'ny tanimbary, ary manadio ny vokatra famokarana. Ary manome antoka ara-teknika matanjaka ho an'ny fampandrosoana ny vokatra maitso. Ny Rice Bird Net ihany koa dia manana fahaizana manohitra ny loza voajanahary toy ny tafio-drivotra sy ny havandra.
Ity lahatsoratra ity dia mampiditra indrindra ny endri-javatra amin'ny Rice Bird Net. Nampiakatra be ny voka-bary ny fampiasana ireo vokatra ireo, hany ka lasa malaza be ny vokatra toy ny harato vorona amin’ny fambolena, izay vaovao mahafaly ho an’ny mpamboly ary mihamaro hatrany ny fampiasana ny harato varimbazaha. Arakaraky ny anombohan'ny tantsaha, ny malalaka kokoa ny fampiasana ny vokatra toy izany, no ambony ny tombony. Iza amin'ireo tambajotra fiarovana vorona amerikana no tsara kokoa? Mazava ho azy, Changzhou Kednet.
Fotoana fandefasana: May-19-2021